Ukuthengisa iiBuzzwords ezivela kuMashable | Martech Zone
Abantu eMashable babeke ndawonye le infographic kuyo Iintsuku ezingama-30 zokuThengisa iiBuzzwords. Njengomntu ongakwaziyo ukuma Intengiso thetha, Ndihlala ndixabisa xa sijonga kakuhle Ukuthengisa BS. Ndinyanisekile, nangona kunjalo, kwaye ndiyavuma ukuba ndicinga ukuba le infographic isenokugcwala kuyo.
Imigaqo efana ukuthengisa okwakudala, kwi-infographic kwaye gamification azikho Iibuzzwords zentengiso, ngamagama okwenyani apho wonke umthengisi kufuneka aqonde ngokupheleleyo. Kwaye eyona ngxaki yam inkulu ikwikota Buyela kwi Investment kudweliswa njengegama eliyimpazamo. I-ROI ayilogama ... yinto eyimfuneko ngokupheleleyo. Siyaqhubeka ukubona iiarhente kunye namashishini angajonganga ukubuya kwawo kutyalo-mali asilele. Kwaye xa i-ROI yabo isilele, ibulala ishishini labo- hayi ukuthengisa kwabo nje.
Amanye amagama ngamanye ama-buzzworthy, kodwa ayisiyonto imbi kangako. Ndiyalithanda igama elinomxholo otyebileyo… sihlala sibhekisa kwimigraphics- infographics egxile kakhulu kwisiqwengana sedatha endaweni yebali lonke. Umxholo onokuhluthwa uvakala ngcono kwaye ubhekisa kwindlela abaziphethe ngayo. Izindululo zexabiso kunye nee-KPIs zisenokuba ngamagama e-buzzwords kodwa zibalulekile njengoko abathengisi begxila kumyalezo wabo kwaye belinganisa iziphumo.
tags: Iphulo le-360ukuthengisa okwakudalaidatha enkuluukucofaukuthengisa kwimekoplcumgciniukwenziwa kwesikoeendaba ezuziweyoNxaxhebagamificationukunyuka kwenkunkumaingcingaamava okuntywilakwi-infographicKPIintengiso yemvelip-yorhweboROIisikrini sesibiniukubonisaUmxholo onokutya okululaezentengisoi-solomoubudlelwaneinkokeli yokucingaincoko yabantu ababiniumgangatho wokumalegciwane
Jun 2, 2013 ngo-8:03 AM
Ndiyaluthanda uluhlu lwakho, loo mazwi awaqhelekanga kum, ngoko ke ndicinga ukuba kuluncedo kakhulu ukuwaqonda ngakumbi.
URick Noel, eBiz ROI, Inc.
Juni 7, 2013 ngo-10: 05 PM
Uluhlu olugqwesileyo kunye nolonwabisayo Doug. Uninzi lwethu lunetyala lokusebenzisa iqaqobana lala mabinzana. Indikhumbuza ngomdlalo weshishini we-90s yokugqibela umnxeba weBuzzword Bingo. Ifanelekile kwiifowuni zentengiso ezinde okanye iintlanganiso zenkampani ngokubanzi. Abanye basenokukhumbula. Nangoku indenza ndincume xa ndiyicinga. Ndivumelana nawe malunga ne-ROI yimfuneko, kodwa ndivunyiwe ukuba ndinocalucalulo 🙂